Nabad iyo Nolal iyo Mucaaradka oo tar tankii ugu adkaa kudhexmari doono Dhuusamareeb – Kismaayo24 News Agency
Nabad iyo Nolal iyo Mucaaradka oo tar tankii ugu adkaa kudhexmari doono Dhuusamareeb
by admin 14th January 2020 0363
Tartan adag ayaa la filayaa in maalmo kadib uu dhaxmaro laba Xildhibaan oo u sharaxan kursiga guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug, kuwaas oo kala matalaya siyaasiinta mucaaradka ah iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Labadaan Xildhibaan ayaa ka soo kala-jeeda degmooyinka Ceel-dheer iyo Ceel-buur, waxayna taageero ka kala heestaan Xisbiyada mucaaradka ah ee uu ugu horreeyo UPD, oo ah Xisbiga Madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Labadaan masuul ayaa lagu kala magacaabaa Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo Xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cusmaan oo ay qaraabo yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna noqon doonaan calaamada muujineysa guusha iyo guul darrada Nabad iyo Nolal ee doorashada Galmudug.
Haddii kursiga guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug uu ku soo baxo Xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cusmaan oo ka soo jeeda Ceel-dheer, waxaa cad in ay halkaas ku guul dareysatay Nabad iyo Nolal balse hadii uu kursigaas ku soo baxo Xildhibaan Dr. Gacal waxay u muuqataa in aysan wal wal badan qabin Nabad iyo Nolal, maadaama codadka guddoomiyaha lagu doorto ay ku filantahay musharaxa madaxweyne oo ay wataan.
Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in Cabdinaasir uu illaa iyo hadda u muuqdo inuu ka taageero badan yahay Gacal, taasi oo ahayd sababtii walaacisay dowladda.
Nabad iyo Nolol ayaa isku dayday inay hor-istaagto xildhibaannimada Cabdinaasir ayada oo ka cabsi qabta inuu kursiga ku ciriiriyo Dr. Gacal, hase yeeshee cadaadis ay beeshiisa saartay ra’iisul wasaare Kheyre ayaa lagu ogolaaday.
Ma fududo in rabitaanka dhan kasta uu si sahlan ku yimaado, hasa yeeshee waxaa la sugayaa natiijada ugu dambeysa ee doorashada Galmudug oo ay ka harsan tahay maalmo kooban sida ay maanta shaaciyeen guddiga doorashada ee baarlamaanka maamulkaasi.
DAAWO Muuse Suudi oo Sheegay inuu neceb yahay Madaxweyne Farmaajo
Ra’isul-wasaaraha Liibiya oo weerar Rasaas ah oo lala Beegsadey ka Badbaadey
admin 27th May 2015 27th August 2015
Daawo: Dowlada Malesiya iyo Shacabkeeda oo ka Damqaday Dhibaatada lagu haayo Muslimiinta ku Nool Wadanka Myanmar
Tifaftiraha K24 4th December 2016 4th December 2016
War Hada: Madaxweyne Xasan Shiikh oo ka Tacsiyeeyey Geeridii ku Timid Allaha ha U Naxariistee Marxuum……
Tifaftiraha K24 8th November 2016